महाथिर मन्त्र - भालुलाई पुराण :: Press Chautari ::
कुनै बेलाको मलाया आज मलेसिया भएको छ । नाम मात्र फरक भएको छैन, यसको अनुहारमा पनि आनको तान फरक परेको छ । गरीवी र उपनिवेशको दाग स्वतन्त्र र समृद्धिको चमकले धोइएको छ । तर, नेपालीको मलेसियासँग जोडिएको नियति भने जस्ताको तस्तै छ, कुनै फरक आएको छैन । उपनिवेश मलायामा नेपाली गोर्खा लाहुरे बन्न जान्थे, अहिले बैदेशिक रोजगारीमा नेपाली बहादुर बन्न जान्छन् । फरक यति हो, पहिलेका लाहुरे जंगी पोसाकमा ठाँटिएका हुन्थे, अहिलेका निजी पहिरनमा खुम्चिएका हुन्छन् । पहिलेका स्टर्लिंग पाउण्डमा मोटो कमाइ गर्थे, अहिलेका मलेसियाइ रिंगिटमा पातलो कमाइमै सन्तोष गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, असम्भव भन्ने शव्द मुर्खको डायरीमा मात्र हुन्छ । अर्थात्, एउटा नियत साफ भएको सज्जन मानिसले चाह्यो भने यो संसारमा असम्भव केही छैन । त्यसको दशी नै हो, आजको मलेसिया । अनि, आवश्यक प्राथमिक कुरा हो, दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व र इच्छाशक्ति । मलायाले तुन महाथिर मोहम्मदका अवतारमा त्यो प्राप्त गर्यो र तीन दशकको छोटो अवधिमै मलेसियाको नयाँ कलेवरमा आफूलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्यो । एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने दुई दशकको महाथिर नेतृत्वमा मलेसियाले १७ गुणा प्रगति गर्यो । यो चमकदार प्रगतिका लागि उनले आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक क्रान्ति हैन, आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे । प्रजातन्त्रको पारोले नाप्दा बेञ्चमार्क प्राप्त गर्न नसकेको उनको शासनकालमा महाथिरले जनतालाई विकासको थाल मात्र दिएनन्, समृद्धिको भात पनि पस्किदिए । उनको यो समृद्धि यात्रामा छिमेकी सिंगापुरमा ली क्वान युले बढाएको चमत्कारिक विकास मोडलले उत्प्रेरकको काम गरेको थियो ।
महाथिरले मलेसियाको आर्थिक समृद्धिका लागि तीन पांग्रे रथको कल्पना गरे । उनले मलसियाका तीन मुख्य जाति मलाया, चिनीया र भारतीयलाई त्यो रथका पांग्रा बनाए । त्यसका लागि उनले राजनीतिक स्थायित्व विना विकास सम्भव नहुने सिंगापुरे शैली पछ्याए । र, जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रताभन्दा अािर्थक समृद्धि नै पहिला रोज्नुपर्नेमा आश्वस्त बनाए । उनले त्यसलाई आफ्नो पारामा भने, जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रताको काम छैन । उनले मुलुकका हरेक तह र तप्काका नागरिकको जिम्मेवारी निर्धारण गरे र त्यसमा लाग्न अभिप्रेरित गरे । त्यसैको परिणाम होे, आजको समृद्ध मलेसिया ।
महाथिरको यो अवधारणाले मलेसियाको कायाकल्प मात्र गरेन, एक सफल विकास मोडलकै रुप धारण गर्यो । आज यसले आफ्नो ब्रान्ड पनि बनाएको छ, महाथिर मोडल । यही मोडलको प्रवर्तकका रुपमा आज महाथिरले बोल्ने कुरालाई महाथिर मन्त्र भन्न थालिएको छ । विकासको कोणबाट दक्षिणमा मात्र हैन, उत्तरमा पनि अव यो मोडलको चर्चा हुन थालेको छ । र, उनको यो मोडल तेस्रो विश्वको विकास मोडल हुने सम्भावनाको खोजी पनि शुरु भइसकेको छ ।
यिनै महाथिर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको नेपाल विजनेस कन्क्लेभ, २०१४ को मुख्य वक्ताका रुपमा चैत्रको दोस्रो साता नेपाल आए । उनले रेमिट्यान्स इकोनोमीमा बाँचेको नेपाललाई आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व र जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नुपर्ने आफ्नो सदावहार मन्त्र सुनाए । विकास कार्यक्रमका लागि राष्ट्यि आर्थिक नीति र त्यसमा निजी क्षेत्रको साझेदारीको आवश्यकता औलाए । सबैभन्दा ठूलो कुरा त जनतालाई सपना देखाउनसक्ने राजनेताको आवश्यकता औलाए । त्यस्तो नेताको केन्द्रमा मुलुक र मुलुकबासीको समृद्धि मात्र हुनुपर्ने बताए । यस क्रममा जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पक्षसँग उदार र नरम हुन नसकिने सत्यको पनि उद्घाटन गरे । यस क्रममा कसै कसैले तानाशाह भन्न सक्ने सम्भावनालाई समेत इन्कार गर्न नसकिने तर्फ औल्याउँदै सक्रमण कालमा रहेका राजनेताले प्रिय हुनका लागि प्रिय हुने लोभ पाल्न नहुनेतर्फ पनि संकेत गरे ।
महाथिर मन्त्र सुन्ने अवसरलाई दक्षिणमा मात्र हैन, उत्तरमा पनि एउटा चाडका रुपमा लिने गरिएको छ । नेपालमा पनि यस्तो हुनु अस्वभाविक हैन । तर, नेपालमा आग्रह पूर्वाग्रहको गतिलो खेती हुने भएकाले कतिपयले आयोजक संस्थासँगको सम्वन्धका कारण र कतिले जम्पिंग टु त कन्क्लुजनजस्तो तेस्रो विश्वमा ब्याप्त महामारीका कारण यो अवसरको सदुपयोग गरेनन् । जे होस् कतिपय सुन्नु नपर्ने र पुग्नु नपर्ने सोल्टी क्राउनप्लाजा पुगे पनि कति सुन्नुपर्ने र पुग्नुपर्ने नपुगको पनि देखियो ।
जे होस्, नेपालमा पनि महाथिर मन्त्र गुञ्जियो । उनको मन्त्रको सार थियो, राजनेतामा प्रष्ट दृष्टिकोण, दृष्टिकोणका आधारमा राजनीतिक स्थायित्व र त्यसलाई निर्देशित गर्ने आर्थिक समृद्धिको रोडम्याप । अनि, त्यही रोडम्यापको आधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता । यसरी बन्ने राष्ट्यि संकल्पबाटै मुलुकको कायाकल्प हुने हो । तर, त्यसका लागि नेपालका साझेदारहरु तयार छन् त ? मूलप्रश्न यो हो । यही लाख टक्काको प्रश्न छोडेर महाथिर नेपालबाट विदा भए ।
उनी गएपछिका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने जुन बेला उनी नेपालमा आए, त्यो समय नै ठीक थिएन कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । उनलाई ल्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ त्यतिबेला तीन वर्षे चुनावको ज्वरोले थलिसकेको थियो, अहिले त्यसको प्रकोप अझ झन बढेको छ । कन्क्लेभमै सहभागिता र सक्रियताको कोणबाट महासंघमा प्रष्ट दुई धार देखिन्थ्यो । वर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्य र उनको खेमा यसलाई आफ्नो कार्यकालको महान उपलव्धीको रुपमा व्याख्या गर्दै थियो भने अर्को पक्ष यसको असफलतामा आफ्नो सफलताको हिसाव किताव गरिहेको थियो । उनी गएपछि त चुनावको महामारीले कसैलाई पनि त्यतातिर ध्यान दिने फुर्सद नै छैन । त्यसैले आयोजकहरु नै विभाजित र विथोलिएको मनस्थितिमा रहेकाले त्यो कोणबाट महाथिर मन्त्र वेवारिसे अवस्थामा पर्यो भन्दा फरक पर्दैन ।
रह्यो अन्य साझेदारहरुको प्रश्न, सत्ता राजनीतिमा चुर्लुम्मै डुबेका सरकार र राजनीतिक दलका नेतालाई त्यतातिर सोच्ने फुर्सद नै छैन । सरकारको पुलका रुपमा रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत आफूलाई महाथिर सुन्नेभन्दा धेरै माथिको हैसियतमा राख्छन् । नेपालको नागरिक समाज अनि अर्थतन्त्र र विकासवादलाई बुझ्ने अभियन्ताहरुलाई पनि यो खासै चासोको विषय हैन । पश्चिमा विकास बाँड्न आएकाहरुका लागि त यसै पनि महाथिर प्रिय नाम हैन, त्यसैले उनीहरु यस आयोजनालाई सम्झाउनभन्दा पनि बिर्साउन नै चाहन्छन् । रह्यो जनताको कुरा, नेपाली जनता जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रतालाई नै प्रजातन्त्र ठान्छ र त्यसैमा अभ्यस्त भैसकेको छ । योभन्दा फरक महाथिरले भन्ने गरेको जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्रता हाम्रो लागि त्यति रुचिको विषय पनि हैन ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा अहिलेका लागि महाथिर आए, महाथिर गए, योभन्दा भिन्न शीर्षक बनाउन सजिलो छैन । अझ, नौ दिनमा नौलो र वीस दिनमा विर्स्यो हुने हाम्रो सनातनमा त महाथिर मन्त्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तो भयो भन्न पनि सकिन्छ । जसले सुन्नुपर्ने हो, जसले अपनाउनुपर्ने हो, उनीहरुले नै खासै वास्ता नगरेको यो पुराण कतै भालु पुराण त भएन ? प्रश्न गर्न सकिन्छ तर उत्तर कसले दिने ? त्यही पक्ष नै नेपालमा छैन । शायद नेपालमा त्यही पक्ष नदेखेर होला, जाने बेलामा पनि महाथिर भन्दै थिए, जिम्मेवारी विनाको स्वतन्त्रताको काम छैन ।
सोमवार, २०७० चैत्र १७ गते २१:५८ / Monday, Mar 31, 2014 9:58 pm
अरु समाचारहरु :: विचार / अभिव्यक्ति
1. महाथिर मन्त्र - भालुलाई पुराण
2. लिम्बुवान सेरोफेरो राजतन्त्रको अन्त्य
3. राष्ट्रियतामा संकट
4. समानुपातिक महात्म्य